Ihe ị ga-eri n'oge ọkọchị na Tokyo | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-eri n'oge ọkọchị na Tokyo
Mariela Carril | | Nduzi, Tokio
Oge ọkọchị nwere ike ọ gaghị abụ oge kachasị mma nke afọ iji gaa Tokio ebe ọ bụ na ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, mmiri na-ezo ma a na-enwe oke iru-mmiri mana ndị nkịtị nke ụmụ mmadụ enweghị ike ịhọrọ mgbe ha ga-ezumike oge ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, anyị enweghị nhọrọ ọzọ.
Ozi ọma ahụ bụ na Tokyo bụ obodo nwere ọtụtụ mmadụ nke na ọhụhụ oge ọkọchị anaghị ahụkarị ma enwere ọtụtụ ọrụ ịme. Ọzọkwa, ebe a na-a beerụ biya mgbe niile oyi ma nwee ụfọdụ Nri oge ọkọchị nke ga-anwụ maka. Chọsie ike!
1 Yolọ oriri na ọ Resụụ Tokyo
2 Oyi soba
8 Somen oyi
Yolọ oriri na ọ Resụụ Tokyo
Nke mbụ, oge eruola maka ndụmọdụ ụfọdụ ebe ọ bụ na ndị Japan dị iche iche na Tokyo ị ga-amata otu esi aga ịkwalite. Enwere ike iji mmadụ n'ụlọ nri na-edozi tebụl n'èzí ma na-eri ma na-a drinkingụ n'akụkụ ụzọ, n'okpuru nche anwụ mara mma, na anyanwụ, na-ele ndị mmadụ na-agafe. Nke a abụghị ikpe ebe a.
Tokyo bụ obodo ndị mmadụ karịrị akarị nke mere na ihe jupụtara na ya bụ ụlọ na agbanyeghị na ọ bụ obodo seismic ụlọ na-arị elu ma na-ada. Onye ọ bụla na-enwekarị subsoil so ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ ndị Japan enweghị ebe ọ bụla a ga-ahụ ha. Na onye ahụ ga-eme ka ọ mara. Na mgbakwunye, belụsọ na ihe ịrịba ama ndị dị na mpụga ụlọ ahụ nwere foto nke ihe ndị dị gburugburu yana nri ha na-enye, anyị enweghị ike inye anyị echiche nke ihe anyị ga-achọta ...
Ma mkpesa ahụ bụ kpọmkwem nke ahụ. N’amaghi ihe ichotara ma n’eji n’aka n’ezie na o gabu ebe puru iche n’enwe ezigbo nri. Ozugbo ị gbalịrị ịgbada n'ụlọ dị n'okpuru ala ma ọ bụ buru ụlọ mbuli elu gaa n'ụlọ nri na-amaghị ama, ị mụtara ihe mmụta gị. Ọ baghị uru ebe ụlọ nri dị!
Ee noodles, onyinye oyi. Ọ bụ okwu nke iji ya mara. Nkpuru osisi Japanese nwere ọmarịcha yabụ n'oge na-adịghị anya ị ga-agabiga ihe mgbochi ịtụnanya ma nwee ọ .ụ. Na nudulu buckwheat, soba, ha bara ọgaranya nke ukwuu na agbanyeghị na a na-ejere ha ozi oge niile n'afọ na oge okpomọkụ n'oge okpomọkụ ha na-abịa n'ụzọ magburu onwe ya.
Ha anaghị enye ọtụtụ carbohydrates, nwere otutu vitamin B na ume. A na-eji efere soba na-eri oyi na-esote yabasị na-acha iberibe na n'ezie, mmetụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na oseose.
A na-ahụ ya ebe niile, a na-eri ya ngwa ngwa, a na-eme ya ugboro ugboro. Ọ bụ ihe gbasara a ụdị ice cream mere na slush ice toro na ụtọ ihendori A na-ejikarị ya na ice cream ma ọ bụ agwa uhie dị ụtọ. Ọ na-enye ume ọhụrụ n'agbanyeghị na agwa dị egwu ...
Ọ dịghị ihe dị mma karịa a salad maka oge ọkọchị ma karịa ma ọ bụ pekarịa ihe ọ bụ maka ya. Ọbụlagodi na nwere noodles, nke kachasị mma n'ụdị Japanese. Na noodles bụ oyi na-eje ozi na ọtụtụ akwụkwọ nri yi. Echiche bụ na efere bụ ihe dịkarịrị nso na egwurugwu, ị maara karịa agba nwere vitamin ndị ọzọ.
Yabụ enwere karọt, kukumba, ginger na-acha ọbara ọbara na ọbụna anụ ọkụkọ. A na-etinyezi ya na mmanya na soy ihendori.
Nri a bara uru ọbụlagodi ịbịaru nso ụlọ ahịa ahụ ma sụgharịa foto nke usoro esi esi nri gị. Ọ mara mma! A na-ahụ ya nke ukwuu n'oge ememme ma na-ahụkarị oge ọkọchị: mmiri mmiri azụ, na uto nwayọọ na udidi, a na-akpọ ha Enyemaka, esie ya na imi ihe: a na-arapara ha na ezé ezé ma tinye ya gburugburu.
Ayu di ka carp, gwuru mmiri dika mmiri oku, ma ma ama na Japan n'ihi na a na-ewere ha dika ndi obi ike.
Ebe ọ bụ na oge Edo, nke ahụ bụ etu esi akpọbu Tokyo, nri a bụ undisputed king of summer. Ọ bụ nri bara ụba na vitamin B na abụba Omega-3, yabụ nri bụ mgbapụta ike.
Zọ kachasị ewu ewu iji jeere ya ozi bụ Kabayaki, steamed eel na ụtọ soy ihendori ke matarasị nke osikapa Japan. Hmm ...
Nke a bụ a efere na anụ ezi. Ozugbo anụ ezi sie ya, a na-etinye ya na mmiri oyi na jere ozi na karim julien, agwa agwa na salsa. Ha na-enye gị tray nwere ọtụtụ ọkwá, nke buru ibu nke na anụ ezi na-egbu ya na akwa na akwa nke akwụkwọ nri, ụfọdụ pịkụl gbara ụka n'ime obere efere ọzọ na obere arịa abụọ nwere sauces.
Ọ na-akpọ somen ka noodles dị ezigbo mkpaHa na-esi nri n ink iku anya na n'oge ura, ha buru a ofe oyi nke nwere ike inwe mgbakwunye ndị ọzọ. Onwere ebe etinyere akuku ice. Ihe niile bụ ịchụpụ iru mmiri nke Tokyo.
Goya? Ee, ọ bụ aha mkpụrụ osisi, a ụdị egusi Dị ka ọgwụ ndị China, ọ na-enye ike dị ukwuu ebe ọ bụ na ọ bara ọgaranya na vitamin A na C na antioxidants. Thatzọ nri ndị Japan si egosi oke ịhụnanya ka ị hụ ya n'ọtụtụ ebe. Ma o nwere ihe ijuanya ...
Ọ dị ilu! Ọ bụghị ụtọ egusi, nectar na stof. Ọ bụrụ n’ịga Okinawa, oge ọkọchị mara mma na Japan, ị ga-akwụsị ịnwale ya n’ihi na ọ bụ ewu ewu. Soro ncha ntutu, nri nke tofu eghere eghe, akwa na anụ ezi.
Abiala m Japan n'oge oyi ma eziokwu bụ na achọghị m iri suhi oyi ma n'oge ọkọchị ọ bụ akụkọ ọzọ. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta ndị na-ewu ewu na ndị njem ugbu a Ahia Tsukiji Nwere ike ịga rie sushi na Sushi Dai na Daiwa Sushi. Ndị ahịa enwere mgbe niile mana nchere ahụ bara uru. Sushi dị oke mma.
Tọrọ ụtọ. Ọ bụ panko nri ata ezi, Achịcha achicha ndị Japan, nke gbara ọkpụrụkpụ, na nke e ghere eghe. Nnọọ crunchy, dị ezigbo ụtọ. N'izugbe jere ozi na osikapa na larịị na ọtụtụ nke shredded kabeeji, ụfọdụ ples, na miso ofe. Ihe niile dị na tray, ụdị ndị Japan.
Nwere ike ịnye akwụkwọ nri anụ ezi, ịnye ụgwọ-katsu, ma ọ bụ rosu-hatsu, anụ site na ọdụ ma ọ bụ azụ nke anụmanụ ahụ. Nke abụọ abụrụ ihe juicier, ya na abụba abụba. Na nke a ihe ị kwesịrị ịma bụ na dabere na ịkpụ na ekpomeekpo dịgasị ọ bụ ezie, ọ dabara nke ọma maka ndị anyị na-anaghị aghọta Japanese ma ọ bụ ghọta obere, ụdị niile dị ụtọ. Enwere ọtụtụ ụlọ nri na-ahụ maka Tonkatsu waku. Na Shunjuku nwalee Inaba Wako, n'ime Takashimaya, na Tokyu Hands.
Nri ndị a dị ụtọ, dị mfe, ewu ewu ma dịkwa ọnụ ala. Ndụmọdụ ikpeazụ: dị ka ọ dị n’ọtụtụ obodo n’ụwa nri ehihie dị ọnụ ala karịa nri abalị ya mere ọ bụrụ na-amasị gị ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-agbalị na-aga n'ehihie. Enwere m nri ehihie na ebe ndị mara mma, na fim, maka yen 1000, ihe dị ka dollar 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Ihe ị ga-eri n'oge ọkọchị na Tokyo
Ebe ị ga-ahụ na nleta Edinburgh